Xerada Mashup toddobaadkan ee Mountain View, CA | Martech Zone
Xerada Mashup toddobaadkan Mountain View, CA
Talaado, July 11, 2006 Talaado, July 4, 2017 Douglas Karr
Toddobaadkan, waxaan si murugo leh ugu maqanahay dhinaca Mashup Camp. Xilalkeyga cusub ee shaqada ayaa dib iiga riixay Isdhexgalka iyo in badan oo ku saabsan maareynta wax soo saarka. Sanadkii la soo dhaafey waxaan kaqeyb galay Xerada Mashup Camp ee sanadlaha ah isla markaana waxaan si dhaqso leh saaxiibtinimo ula dhisey koox tayo sare leh oo shakhsiyaad ah oo dhistey barnaamijka. Xaqiiqdii, waxaan runtii martigaliyaa websaydhada Xerada Mashup waxaanan naqshadeeyay astaanta ay adeegsanayaan sannadkan.
Tegitaanka xerooyinkaas, mid ayaa gabi ahaanba ku dhiirrigeliya hal-abuurnimada iyo kartida ganacsi ee lagu soo ururiyey isla qolka. Kuwani waa ragga ku riixaya tiknoolajiyada xadka, dhisida isdhexgalka cajiibka ah ee u dhexeeya adeegyada iyo barnaamijyada barnaamijyada kala duwan, luqadaha, iyo naqshadaha. Qaar ka mid ah demo aad aragto gabi ahaanba way ku qarxinayaan
U shaqeynta ah API adeeg bixiye, xitaa way ka xiiso badneyd maxaa yeelay waxaad u dhistay astaamo qof isticmaali karo, laakiin marnaba ma maleynin in dadka waaweyni ay ku dari doonaan teknoolojiyadaada alaabooyinka ay soo saareen sida ay u leeyihiin.
Haddii aad ku sugan tahay Mountain View, CA, toddobaadkan oo aad baajiso ciyaartaada golf-ka waxaadna tagtaa Mashup Camp. Waa khilaaf la'aan kuu oggolaan doonta inaad haysato hal milyan oo fikrad ah oo ku saabsan sida loo ballaariyo wax soo saarkaaga gaarka ah. Igu salaam David Berlind aniga (marka uu helo fursad uu ku neefsado!). David wuxuu udub dhexaad u yahay inuu jiido dhacdadan weyn wuxuuna faraha ku hayaa garaaca wadnaha Mashup.
Waxaan jeclaan lahaa inaan halkaas joogo!
Tags: david berlindxerada mashupmuuqaalka buuraha
Suuq geyn Wada Shaqeyn leh Google Spreadsheets
Xiriirka Internetka oo gaabis ah? Waa tuubooyinkaas buuxinaya!